In this cashar video oo bilaash ah, Waxaan kugu casuumayaa inaad ogaato aaladda abuurista maadada Canva.
Canva waa aalad online ah oo kuu ogolaanaysa inaad si fudud u abuuro muuqaalo waayo, shabakadaha bulshada.
this tababar online bilaash ah, wuxuu kugu martiqaadayaa inaad ogaato aaladda iyo sidoo kale xulashooyinka badan ee la bixiyay.
Un tutorial si aad u ogaato lacag la’aan sida ay u shaqayso Canva
Qeybtan casharrada fiidiyaha waxay kuu oggolaan doontaa inaad ogaato:
Qalabka qoraaga ee Canva; Qalabka kooxda, Ikhtiyaaraadka tafatirka iyo shaandhooyinka, Fursadaha wadaagga MCQ yar si loo ansixiyo aqoontaada cusub.
Waxaan ku hadhay dabcan gacantaada qaybta Su'aalaha La isweydiiyo iyo Is -kaashiga Mutual.
Helitaan wanaagsan oo wanaagsan tutorial.
Bilaash: Baro Canva Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
hore“Dib -u -tababarid xirfadeed waa ficil ballanqaad. "
socdaDhis mashruucaaga xirfadeed oo raadso jidkaaga: ku dheji Cité des Métiers ee Val de Marne